China Yakavhunika bhiriji aruminiyamu hwindo Mugadziri uye Mutengesi | Mujiang
1. Iyo yakaputsika bhiriji aruminiyamu ine yakanaka yekupisa yekuisa. Iyo yemukati neyekunze mafuremu ekupisa ekuisa profiles anosanganiswa nehunyoro. Iyo furemu yakavharirwa zvine mutsindo neimwe tambo yerabha uye mitsetse miviri yemvere. Iyo ine yakanakisa mweya kuomarara uye kuomesa kwemvura uye yakanakisa kupisa kuchengetedza kuchengetedza. Bhandi repahwindo rinotora girazi rakaumbwa, izvo zvinoita kuti hwindo rinyatsoratidza kurira kwakanaka, kupisa kupisa, kuchengetedza kupisa uye basa, kuchengetedza yakawanda yekudziya uye kutonhora mutengo Iyo yekupisa coefficient K kukosha kuri pasi pe 2.23-2.94w / m2 · K Simba rekuchengetedza simba rinoshamisa, uye mari yekuchengetedza magetsi mumakore akati wandei inokwana kubhadhara mari yapfuura.
3. Anti condensation uye chando chebridge rakaputswa aluminium. Bhiriji rinotyora aruminiyamu chimiro rinogona kuona iyo nzira-yekuisa chisimbiso chimiro chemikova nemahwindo, inokamuranisa zvine mutsindo kamvura yemvura, inobudirira kuziva iro gasi mvura isobaric muyero, zvakanyanya kugadzirisa kusimba kwemvura uye kuomesa kwemhepo kwemikova nemahwindo, uye kuzadzisa mhedzisiro mahwindo akachena uye akajeka.
4. Dhizaini yeiyo anti mosquito screen hwindo rebridge rakaputswa. Invisible screen hwindo rinogona kuiswa uye kushandiswa mukati nekunze. Iyo ine maitiro eanti anti mosquito uye kubhururuka.
5. Anti kuba uye anti kusunungura mudziyo webridge kutyora aluminium. Yakashongedzerwa neyakasiyana-siyana-poindi Hardware kukiya kuverengera kudzikama uye kuchengeteka kwemawindo ari kushandiswa.
BridgeBhiriji rinotyora aruminiyamu rine mutsindo wakanaka wekuputira mashandiro .. Maumbirwo ayo akanyatsogadzirwa uye majoini akaomarara. Mhedzisiro yekuyedzwa inoratidza kuti iko kurira kwemhepo kunosvika 30-40db, izvo zvinogona kuve nechokwadi chekuti vagari vari mukati memamita makumi mashanu pamativi ese enzira yekumisidzana havavhiringidzwe neruzha, uye iro rakapoterera dhorobha rinogona zvakare kuona kudzikama kwemukati uye kudziya.
Pashure: CPL musuwo
Zvadaro: Casement hwindo